कोरोना निको भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्छ ? – Karnalisandesh
कोरोना निको भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्छ ?
प्रकाशित मितिः १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १७:३५ October 2, 2020
काठमाडौँ। विज्ञहरूले कोरोना मुक्त भएपछि अनुशासित जीवनशैली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा.सन्तकुमार दासका अनुसार कोभिड पोजिटिभ भएपछि शरीर कमजोर हुन्छ।
यसैले कोभिड नेगेटिभ आएलगत्तै कडा शारीरिक मिहिनेत गर्नुहुँदैन । पर्याप्त आराम गर्नुपर्छ। पौष्टिक खानपानअन्तर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने खाद्य र पेय पदार्थ उपभोग गर्नुपर्छ। योगाभ्यास, ध्यान गर्नुका साथै बिहान–बेलुका सुरक्षित रूपमा हिँड्नु फाइदाजनक हुन्छ।
उनका अनुसार कोभिड निको भएपछि खाना नरुच्ने, नपच्ने र खाने इच्छा नहुने समस्यासमेत देखिन सक्छ। त्यसैले जंक फुड र बढी बोसो, चिल्लो भएको खाद्य पदार्थको उपयोग गर्नुहुँदैन। हरियो सागसब्जी र फलफूल पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्नुपर्छ।
दिनहुँ गेडागुडी, पोषिलो तरल पेय पदार्थ र पानी बढी सेवन गर्नुपर्छ। स्वस्थ फोक्सोका लागि प्राणायाम लाभकारी देखिएको छ। चिकित्सक एवं योग प्रशिक्षकको सल्लाहमा फोक्सो बलियो वनाउने प्राणायाम गर्नु फाइदाजनक हुने उनको भनाइ छ।